Iimihlaba ze-8.1.1 kwisicatshulwa - i-Geofumed
Imihlaba ye-8.1.1 kwisicatshulwa
NgoJuni, 2012 Ikhosi ye-AutoCAD 2013, Izifundo zamahhala
Izinto zombhalo zingabandakanya ixabiso elixhomekeke kumzobo. Lo mbandela ubizwa ngokuba yi "Field Fields" kwaye banenzuzo yokuba idatha abayifakayo ixhomekeke kwiimpawu zezinto okanye iiparitha apho zidibene khona, ngoko ziyakwazi ukuhlaziywa ukuba zitshintsha. Ngamanye amagama, umzekelo, ukuba senza into ebhaliweyo equka intsimi ebonisa indawo yecangechunge, ukubaluleka kwendawo ebonisweyo kungahlaziywa xa sihlela loo ngxande. Ngemihlaba yesicatshulwa simele sibonise inani elininzi lolwazi olubandakanyekayo, njengegama lomfanekiso wefayile, umhla wokushicilela kwayo yokugqibela kunye nezinye ezininzi.
Makhe sibone iinkqubo ezibandakanyekayo. Njengoko sele sisazi, xa sakha into ebhaliweyo, sibonisa inqaku lokufakela, ukuphakama kunye nekota yokuthambekela, ngoko siqala ukubhala. Ngaloo mzuzu sinokucofa iqhosha lase mouse kwaye sisebenzise "inkalo yokufaka ..." kwi menu yemenu. Isiphumo kwibhokisi yencoko kunye nazo zonke iindawo ezikhoyo. Nasi umzekelo.
Le ndlela yindlela efanelekileyo, ngokusemandleni, ukudala imigca yesicatshulwa kunye neendawo zokubhala. Nangona kunjalo, akuyona indlela yodwa. Singafaka kwakhona imihlaba yombhalo usebenzisa umyalelo we "Field", oya kuvula ibhokisi yencoko yababini ngokusebenzisa ubukhulu besikhokelo sombhalo kunye nexabiso le-skew. Enye indlela yokusebenzisa inkinobho "Insimu" kwiqela "Idatha" ye-"Faka" ithebhu. Kukho nawuphi na, inqubo ayifani kakhulu.
Ngapha koko, ukuhlaziya ixabiso leminye imimandla yesicatshulwa yomdwebo, sisebenzisa umyalelo we "Update field" okanye iqhosha elithi "Update fields" yeqela "Idata" esasitshilo. Ekuphenduleni, iwindow yomgca welayini isicela ukuba sibonise ukuba amasimu ahlaziywe.
Kufuneka kuqatshelwe nokokuba sinokuguqula indlela i-Autocad eyenza ngayo ukuhlaziywa kwamasimi. Inkqubo eguqukileyo "FIELDEVAL" inquma le ndlela. Iimpawu zayo ezifanelekileyo kunye neendlela zokuhlaziywa ezihambelanayo zichazwe kwithebula elilandelayo:
Iparameter igcinwe njengekhowudi yebhinqa isebenzisa izibalo ezilandelayo:
1 Ihlaziywe xa ivuliwe
I-2 ihlaziywa xa igcina
4 Ihlaziywe xa iceba
I-8 ibuyekeziwe xa usebenzisa i-ETRANSMIT
I-16 ihlaziywe xa ihlaziywa kwakhona
Uhlaziyo lwemihla ye31
Ekugqibeleni, amasimi anemihla kufuneka ahlale ehlaziywa ngesandla, kungakhathaliseki ukuba yixabiso le "FIELDEVAL".
Post edlulileyo«Edlulileyo I-8.1 Umbhalo kumgca
Post Next izinto umbhalo 8.2 UkuhlelaOkulandelayo "